Juventus oo Xaqiijisey Finalkii Sagaalaad ee koobka Champions League – Radio Daljir
May 10, 2017 4:05 b 1
Kooxda kubada Cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa Xaqiijisey in ay dheeli doonaan Finalka koobka Xiisaha badan ee UEFA Champions League kadib markii ay kulankii lugta labaad ee Semifinalka ay 2-1 kaga badiyeen kooxda Monaco ee dalka France.
Juventus ayaa Cayaari doonta Finalka labaad ee Champions League 3 Sano Gudahood sidoo kalena Waxa ay Cayaari doonaan Finalkii 9 aad ee Koobkaan oo ay qaadeen 2 Mar oo kaliya waxaana ugu dambeysey 21 Sano kahor in ay ku Guuleystaan.
Labada Kulan ee ay ladheeleen Monaco kooxda Juventus waxaa ladhihi karaa Waxaa kulamdii Dani Alves maadaama 4 ta Gool ee ay dhaliyeen uu dhamaantood ku luglahaa 3 uu dhiibey iyo mid uu dhaliyey Waxaana uu u dheeley Xidiga dalka Braziil oo 35 sano jir ah sida 25 jirkii oo kale.
Kylian Mbappe oo ah Xidig 18 Sano jir ah ayaa qabtay shaqo ay qaban waayeen Xidigaha MSN ee Barcelona maadaama uu Gool ka dhaliyey Juventus Goolkaas oo ahaa kii 3 aad ee shabaqooda taabta dhamaan kulamadii Champions League ee ay dheeleen Xiligaan balse Juventus waxay difaacatay Recordka u socda ee ah in aan looga badin Garoonkooda 51 kulan dhamaan taratamada ay ay ka qayb galeen.
Finalka koobka Champions League oo la dheeli doono 3 da bisha June ayaa lagu qaban doonaa Magaalada Cardiff ee Caasimada Wales iyada oo lafilayo in dib loo Xasuusan doono Finalkii koobkaan ee 1998 dii oo ay dheeleen Real Madrid iyo Juventus markaas oo Madrid ku qaaday koobka 1-0.
Subs not used: Neto, Asamoah, Lichtsteiner, Rincon
Goalscorers: Mandzukic 33, Alves 44
Booked: Bonucci, Mandzukic
Subs not used: De Sanctis, Carrillo, Dirar, Diallo
Goalscorers: Mbappe 69
Booked: Falcao, Mendy
Kooxda kubada Cagta Juventus ee dalka Talyaaniga guusha ay xalay gaartay waaa mid ay u qalanto. Waaayo 3 kulan eee ugu danbaysay shabaqooda lama taabin markii xalay lagarerbo waxaaba la isdhihi karaaaa iyadaaaba u qalanta inay qaado chanpionka oo ay inbadan kutaaamaysay inay qaado sumcada dalka #Talyaaaniga ay sooo celiso thanks